(DAAWO) AL-Shabaab oo Soo Bandhigay Rag ay ku Sheegeen Jaajuus ku dhex jiray.. | Nabadqaad.com
(DAAWO) AL-Shabaab oo Soo Bandhigay Rag ay ku Sheegeen Jaajuus ku dhex jiray..
Sep 19, 2017 - Aragtiyood
Warbaahinta Ururka Al Shabaab ayaa soo bandhigtay Muuqaal Video ah oo ay ka duubeen saddex nin oo u dhashay dalka Kenya, Al Shabaabna ay ku eedeeyeen inay yihiin jawaasiis.
Saddexdan nin ayaa waxa ay ka tirsan yihiin Ururka Al Shabaab, balse waxaa lagu eedeeyay inay yihiin jawaasiis u shaqeysa Dowladda Kenya iyo Dowladaha kale ee Reer Galbeedka.
Ninka Koowaad ayaa waxaa magaciisa lagu sheegay Cabdulaahi Talaal Muuse oo 28 jir ah, kana soo jeeda magaalada Nairobi ee dalka Kenya, kaasi oo ay Shabaab ku eedeeyeen inuu xiriir wada shaqeyn la lahaa Dowladda Kenya qaybteeda Sirdoonka.
Ninkan ayaa Muuqaalka laga soo bandhigay wuxuu kaga sheekeynaya inuu ka tirsan yahay qaybta Jaajuusiinta xiriirka la leh Sirdoonka dalka Kenya, arintaasi oo uu lacag ku qaadan jiray, wuxuuna qaabilsanaa gudbinta taleefoonada madaxda Shabaab iyo Sawiradooda.
Ruuxa kale ee Shabaab ay soo bandhigeen ayaa waxaa magaciisa ay ku sheegeen Cabdi Casiis Mukayo Omambia kaasi oo Shabaab dhexdooda ka gudbin jiray xogta iyo macluumaadka Shabaab, wuxuuna u gudbin jiray Sirdoonka Kenya sida Shabaabka ay sheegeen.